स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कस्तो दुध पिउने ? किसानले दिए यस्तो महत्वपूर्ण सुझाव – Etajakhabar
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कस्तो दुध पिउने ? किसानले दिए यस्तो महत्वपूर्ण सुझाव
नेपालगन्ज २८ असोज । बाँके जिल्लाका दुग्ध व्यवसायीहरुले पाश्चराईजेसन अर्थात निर्मलीकरण गरिएको दुध मात्रै उपयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न दुग्ध व्यवसायी सँघ बाँकेको ७ औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनीहरुले हाल बजारमा विभिन्न थरिका दुधहरु बिक्री भइरहेको र त्यसको मारमा उपभोक्तासँगै दुग्ध व्यसायीहरु पनि परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपालगन्ज बजारमा कुनै चेकजाँचबिनै भित्रिने भारतिय दुध खुला रुपमा बिक्री भइरहँदा पनि नियन्त्रण हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यसैगरि, बजारमा एकै पसलमा मदिरा, किराना र दुग्ध पदार्थ बिक्री भइरहेको भन्दै उनीहहरुले यसरी बिक्री हुने दुध स्वस्थ नहुने बताएका छन् । यस किसिमका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायसँगै उपभोक्ताहरु पनि सचेत बन्न जरुरी रहेको संघका अध्यक्ष बदरुद्धिन अन्सारीले बताए । अध्यक्ष अन्सारीले कतिपय डेरी सन्चालन गरेपनि दर्ता नगर्ने र दर्ता गरेकाहरुले कारोबार नगर्दा पनि थप समस्या भएको बताए ।
सन्चालनमा रहेका दुग्ध डेरीहरुमा अनुगमन गरी सजाए र पुरस्कृत गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा अन्सारीको जोड थियो । हाल नेपालगन्जमा ६ हजार देखि ८ हजार लिटरसम्म दैनिक दुध संकलन भएर बजारमा जाने गरेको नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजना डिडिसि नेपालगन्जका प्रमुख अर्जुन पन्थिले बताए । दुग्ध वितरण आयोजनाले बजारमा पठाउने प्याकेजिङ गरिएको दुध सुद्धिकरण गरिएको हुने हुँदा उक्त दुधमात्रै प्रयोग गर्ने पन्थीले आग्रह गरे ।
नेपालगन्ज उपमहानरपालीकाका उपमेयर उमा थापा मगरले उद्घाटन गरेको संघको सभामा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च बाँकेका अध्यक्ष बसन्त गौतमले दुग्ध व्यवसायीका समस्या र समाधन विषयक कार्यपत्र र संघका सचिव शिवशंकर उपाध्यायले संघको वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २८, २०७४ समय: २०:०३:१३